विश्व नै काेराेनासँग जुधिरहेका बेला ट्रम्पले फेरी गरे यस्ताे ठोस कदमकाे घोषणा, अब के गर्लानी व्यापारी ? — Imandarmedia.com
विश्व नै काेराेनासँग जुधिरहेका बेला ट्रम्पले फेरी गरे यस्ताे ठोस कदमकाे घोषणा, अब के गर्लानी व्यापारी ?
अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही राज्यले “सुरक्षित, क्रमिक र चरणबद्ध रूपमा” व्यापार तथा व्यवसाय पुन: सञ्चालन गर्न ठोस कदम घोषणा गरेको बताएका छन्। अमेरिकामा कोरोनाभाइरस फैलिन नदिन लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाएर अर्थतन्त्र पुन: सञ्चालन गर्न निर्देशिका जारी गरेपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो।
शनिवार ह्वाइट हाउसमा कोभिड-१९ बारे आयोजित दैनिक ब्रीफिङका क्रममा ट्रम्पले टेक्सस र भर्मन्टले “उपयुक्त सामाजिक दूरीका सावधानीसहित” केही व्यवसायहरू सोमवारबाट पुन: खोल्न दिने बताएका छन्। उनले फ्लोरिडा राज्यको समुद्री तट पनि पुन: खुल्न लागेको बताए।
ब्रीफिङकै क्रममा उनले भाइरसले आफ्नो उत्कर्ष पार गरेको सङ्केत देखिएको दाबी गरे। तर स्वास्थ्यविज्ञ र केही राज्यका गभर्नरहरूले भने प्रतिबन्धहरू छिट्टै हटाउँदा त्यसले थुप्रै मानिसहरू सङ्क्रमित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिनुमा जिम्मेवार देखिए चीनले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार उनले चीनलाई चेतावनी दिँदै नियतवश फैलाइएको पाइए चीनले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् । तर, उनले अमेरिकाले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषयमा भने केही बताएनन् ।
सोही आधारमा ट्रम्पले जनसंख्याको आधारमा मृत्यु हुने संख्यालाई तुलना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । तर, चीनमा भने १० लाख मानिसमा केवल तीन दशमलव ३ मानिसले मात्र मृत्यु भएको तथ्यांक छ । ट्रम्पले कोरोना भाइरस फैलिनुमा चीन जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
शनिबार पनि उनले कोरोना भाइरसको महामारीमा चीनले पारदर्शिता नदेखाएको र यसलाई नियन्त्रणको कदम निकै ढिला मात्र चालेको बताए । उनले चीनले समयमा नै यो भाइरस रोकेको भए अहिले विश्वभर यसको महामारी नफैलिने दाबी गरे । तर, ट्रम्प आफैंले पनि भाइरस नियन्त्रणको लागि समयमा नै उचित कदम चाल्न नसकेको आरोप खेप्दै आएकाे द साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले समाचार लेखेकाे छ ।